Sivavanye i-Choetech 4-in-1 hub ye-iPad kunye neMacBook | Ndisuka mac
Sivavanye i-Choetech 4-in-1 hub ye-iPad kunye neMacBook
Xa sithetha ngeChoetech kunye neemveliso zayo singagxila kwiinkcukacha ezininzi kodwa ikakhulu sihlala sinomdla kuthi sonke, i ubudlelwane phakathi komgangatho nexabiso abasinike lona. IiHub ze-iPad kunye neMac ngokubanzi sizifumana kuyo yonke indawo kodwa kukho iintlobo ezininzi zehabhu kwaye ngaphezulu kwazo zonke ezininzi ezinganikeli umgangatho osemgangathweni ofunekayo wokunxibelelana nezixhobo zethu.
Ukucinga ukuba uninzi lomthwalo we-MacBook yethu udlula kwezi zixhobo ukongeza kwidatha, ke izixhobo zangaphakathi zezi zixhobo kufuneka zilungile okanye zibengcono kunoyilo oluboniswe ngaphandle. Ityala lale hub-M13 ye-iPad kunye neMac evela eChoetech ngumzekelo ocacileyo womgangatho, uyilo kunye nexabiso elifanelekileyo.
1 Iziko lePad Pro Pro, Air okanye iMacBook Pro
1.1 Incinci kodwa inamandla nge-4k 60Hz HDMI port. Unxibelelwano ezine kwenye
Iziko lePad Pro Pro, Air okanye iMacBook Pro
Kwimeko yethu, besinethemba lokuvavanya le hub kwi-iPad entsha ye-iPad, enye enoyilo lwe-Pro Pro kodwa okokugqibela ayinakuba njalo ke kuye kwafuneka siyivavanye kwi-12-intshi iMacBook engeyiyo into efanelekileyo nokuba yeyiphi na, kuba sisixhobo esinemilinganiselo emincinci kakhulu kwaye ngokungekho mthethweni akujongeka njengokuthetha okuhle.
Kodwa kufuneka kuthiwe i-Choetech Hub isebenza ngokugqibeleleyo kwaye Ingasetyenziswa ngaphandle kweengxaki kuso nasiphi na isixhobo esinezibuko le-USB C, Nokuba kwi-smartphone. Kubonakala ngathi le hub encinci inokuba sisisombululo kubasebenzisi abaninzi abafuna ukuphatha ihabhu yokunciphisa ubungakanani kwimeko yeMac okanye i-iPad uqobo. Ubukhulu bayo bungu-8 x 2.5 x 0.95 cm; Inobunzima obungama-60 eigram kwaye iyahambelana neMacOS 10.12 eSierra ukuya phambili. Ngokucacileyo iyahambelana neChannel OS kunye Windows 10.
Incinci kodwa inamandla nge-4k 60Hz HDMI port. Unxibelelwano ezine kwenye
Ngoku sithetha malunga nokuba kunokwenzeka ukuba ii-MacBook Pros zika-Apple zongeze izibuko le-HDMI, sinokukhetha ukuzama le hub encinci kodwa inomdla. Singatsho ukuba kunjalo Iyakwazi ukubonisa umxholo ngokugqibeleleyo kwisisombululo se-4K. Umvelisi ucebisa ukuba kwi-Pro Pro isisombululo esona siphezulu yi-2K kwi-60Hz.
Amazibuko amane oxhulumaniso asinika esele ichaziwe i-HDMI port, a I-USB C port ekwaziyo Inkxaso yamandla ukuya kuthi ga kwi-60W, Isinxibelelanisi se-3,5 jack sokusebenzisa ii-headphone zakho ozithandayo kunye ne-USB A port enikezela ngesantya sokudlulisa ukuya kuthi ga kwi-480Mbps.
Ngaphandle kwamathandabuzo, le yindawo ehambelanayo negqibeleleyo enika umsebenzisi ithuba lokudibanisa eyona nto bayifunayo kwi-Mac okanye kwi-iPad yabo ngaphandle kokuba neentambo phakathi okanye efanayo kuba iqhagamshele ngqo kwizibuko le-USB C lekhompyuter.
Le adapter yehabhu ye-USB C inokuqhagamshelwa kwikhibhodi ukuyiguqula ibe yicomputer yokuphucula ukuthayipha. Njengokuba ungaqhagamshela imouse, idiski enzima kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo ezisebenzisa izibuko le-USB.
Ngaphandle kwamathandabuzo, le hub ilungele abasebenzisi abaqhele ukuchitha ixesha elide ngaphandle kweofisi okanye ikhaya kwaye awunandawo yokuphatha ihabhu ngonxibelelwano olongezelelekileyo okanye andifuni nje ukuxhoma iintambo kunye neehabhu. Izinto ezenziwa ngazo le hub ziyi-aluminium kunye neplastiki kwaye kuphela kwisithuba esingwevu (okanye ngokufanayo) kodwa ayongxaki ngokusebenza kwayo ngokuchanekileyo.
Singatsho ukuba utyikityo I-Choetech iyaqhubeka nokuba neemveliso ezilungileyo kakhulu kwikhathalogu yayo ebanzi Kwaye kule meko, kwabo bafuna ihabhu ngaphandle kokuzenzisa kakhulu ngokubhekisele kumazibuko akhoyo, ngokungathandabuzekiyo inokuba yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
I-Choetech 4 kwi-1 M13
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sivavanye i-Choetech 4-in-1 hub ye-iPad kunye neMacBook
U-Apple uthenga inkampani rhoqo kwiiveki ezi-3-4
Uyilo lweMac kunye "neMac Pro mini" eqikelelwe nguJon Prosser kwaye uninzi lwethu luyaluthanda